Phakathi kwamaphupha, nguElio Quiroga
Ngexesha UElio Quiroga wayengena kwilizwe lemiboniso bhanya-bhanya, ingqokelela yakhe yemibongo nayo yayivela ngolo hambo ngokuhlelwa kwawo wonke umbhali osakhasayo okanye imbongi.
Kodwa ukuthetha ngo-Elio Quiroga namhlanje kukuqwalasela umdali oguquguqukayo, imbongi, umgcini-skrini kunye nombhali wembali kunye nemvelaphi esusela kukhetho lukaGoya ukuya kwimbasa edumileyo ye-Minotauro ka-2015, emi njengowona msebenzi ubalaseleyo wentelekelelo okanye wenzululwazi wonyaka eSpain. .
Kwaye kanye loo mmandla wentelekelelo okanye intsomi yenzululwazi ephela iyintsimi echumileyo apho izimvo zinokuhlala zihluma phakathi kwebali nje kunye ne-cinematographic.
Kwaye apho sifumana le noveli entsha Phakathi kwamaphupha.
Akukho nto ingcono kunendawo efana necanary observatory yaseRoque de los Muchachos, enye yezona telescopes ezinamandla kakhulu emhlabeni, ukumisa le noveli kunye nenqaku le-claustrophobic kunye neenkumbulo zefilimu. "Ukukhanya" kwaye kwangaxeshanye ifikelele incopho yesindululo esijongene nale ntsomi yenzululwazi ifikeleleka ngakumbi, eso kuthi sonke sithi maxa wambi sikhe siyeke ukujonga iinkwenkwezi.
U-Sonia noJuan benza isibini esigqibeleleyo sobuchule kunye nesomntu. Bobabini bayayithanda i-astrophysics kwaye bajikeleze inkanuko ye-cosmic baye benza uthando olusanda kubamanyanisa ngonaphakade.
Kuphela ngaloo mida "ngonaphakade", ngoko ke ngokuhambelana nendalo iphela engapheliyo, iphetha ngokuchwechwela ibali elichulumancisayo elishwankathela ukukrokra ngokwasengqondweni, amayelenqe, idosi elungileyo yokoyikisa kunye nesingqisho se-cinematographic ekhokelwa ngokugqibeleleyo ngumlawuli wefilimu oguqulelwe ngumbhali .
Kungenxa yokuba uRobert akazange amenywe kolo “hambo lumnandi lwasemva komtshato” kwiteleskopu yaseLa Palma, apho esi sibini silungiselela ukwenza umsebenzi oza kusigcina sixakekile sodwa kangangeentsuku eziliqela. Ukanti inkangeleko yakhe engalindelekanga yincopho kaSonia noJuan.
Naphi na apho obo bukho buvela khona obufuna ukuhamba nabo kuphando lwabo lodwa lweenkwenkwezi, luye lwaphela luphazamisana namaphupha kaJuan, de lwafumana iipasile ezininzi ngakumbi kulowo wenze undwendwe lwakhe.
Ngoku ungathenga inoveli ethi Entre los Sueños, incwadi entsha kaElio Quiroga, Apha:
Iilebula UElio Quiroga, Iinoveli kwinoveli, Iinoveli zentsomi